Mpanome rano → sekoly • University • Kindergarten • Warsaw
Mila dispenser rano ve any am-pianarana, akanin-jaza na oniversite? Ny orinasa Water Point dia manolotra ireo mpamaky rano anaty tavoahangy, mpisotro, loharanon'ny mpitondra an'izao tontolo izao amin'ny banky, izay mpizara manokana izahay any Polonina.
Vao haingana, kalitao rano mihatsara ny rano any Polonina. Ny lalàna Poloney sy ny EU dia mitaky ny fikojakojana ny fenitry ny rano fisotro avo. Raha misy fisalasalana dia azo atao ny mandefa fitiliana momba ny kalitaon'ny rano mikoriana avy amin'ny paompy any amin'ny tobin'ny fahadiovana sy ny fihanaky ny aretina.
Mihabetsaka koa ny olona mampiseho fahalalàna momba ny fahasalamana, izay midika fa miahy bebe kokoa ny zava-pisotro isika. Napetraka ao anaty trano maro ny zavamaniry fitsaboana rano sivana sy mpanondraka rano.
Nanomboka ny 1 septambra 2015 dia norarana avokoa ny sekoly rehetra nivarotra sakafo tsy salama, anisan'izany ny zava-pisotro mamy. Misy adidy anefa ny sekoly hanomezana rano fisotro ho an'ny mpianatra, izay zava-pisotro ara-pahasalamana indrindra ho an'ny olombelona.
Izany no antony maha-zava-dehibe ny fiantohana fa tsy ao an-trano ihany fa ivelan'ny ivelany koa, ny zaza sy ny tanora dia mora miditra amin'ny rano tsara: salama, madio ary matsiro.
Inoana fa ny zaza any amin’ny akanin-jaza, ireo mpianatra sy ny mpianatry ny oniversite dia tokony hanana fidirana tsy tapaka amin'ny rano fisotro eo amin’ny toerana fandalinana, izay andanian-dry zareo mandritra ny ora maro mandritra ny andro. Raha ny tena mety dia tokony ho afaka io rano io ary mora ampiasaina. Ireo orinasa mpamokatra rano fisotro dia manohitra ireo faniriana ireo. Ny fitaovana toy izany dia azo apetraka amin'ny toerana mety amin'ny sekoly tsirairay. Ny ankizy sy ny tanora dia afaka mampiasa azy ireo rahefa tonga ny filàna, izany hoe mandritra ny fiatoana an-dakilasy na aorian'ny fampianarana momba ny fampianarana ara-batana. Ny fidirana tsy tapaka sy tsy manam-petra amin'ny rano madio, madio sy matsiro dia hanamora ny fananganana rano mety tsara amin'ny vatana, ary hamela anao hianatra ny fahazarana ara-tsakafo tsara.
Ny fantson-drano fisotro rano, ny loharano ary ny zava-pisotro isan-karazany, izay azo apetraka amin'ny andrim-pampianarana any amin'ny toerana mora indrindra, manamora ny fanomezana rano tsara sy matsiro ho an'ny mpianatra any an-tsekoly.
Ny dispenser rano fisotro dia tokony hapetraka amin'ny toerana mora idirana: ao an-dakilasy, ao amin'ny lalantsara, ao amin'ny efi-pianarana any an-tsekoly na amin'ny lamban-jaza akaikin'ny gym, izay hiantoka ny fidiran'ny rano avo lenta. Fitaovana natao ho an'ny sekoly dia miaro manokana amin'ny fisorohana ny fikorianan'ny rano amin'ny ankizy.
Raha jerena fa ny loharano lehibe indrindra ny tsiranoka ho an'ny zaza iray dia tokony ho rano tsara, ny fisotroan-drano ny rano no manatanteraka izany fiheverana izany.
Ny dispenser maoderina dia miantoka ny rano madio kristaly mora foana, raha manahena ny vidin'ny manome fidirana rano fisotro ho an'ny mpianatra. Ny tombony fanampiny dia ny fikarakarana ny tontolo iainana ihany.
Ny rano avy amina dispenser iray any amin'ny akanin-jaza, sekoly na oniversite dia manana tsiro sy kalitao tokana ary ahafahanao mitondra fomba fiaina mahasalama sy mamolavola ny fahazarana misotro rano ary misakafo ara-pahasalamana amin'ny tanora.
Satria tokony hisotro rano manodidina ny roa litatra isan'andro ny ankizy, ny vahaolana tsara indrindra dia ny fametrahana dispensers rano fisotro any amin'ny toeram-pampianarana tsirairay, any amin'ny toerana maromaro, mba ho mora amin'ny rano ny mpianatra rehetra.
rano maimaimpoana any am-pianaranarano maimaimpoana any am-pianaranafidirana amin'ny rano any am-pianaranadispenser rano ho an'ny ankizydispenser ny rano an-tsekolyfampianaranaLoharano spaoro any am-pianaranazava-pisotro any an-tsekolympisotro rano ho an'ny sekolyrano ho an'ny ankizy any an-tsekolyrano ao amin'ny oniversiterano ao an-tsekolypaompy rano an-tsekolyloharano rano ho an'ny sekolyLohataona an-tsekoly